Qalabkii lagu baaraayay Boorsooyinka ee Garoonka Berbera oo Ciladoobay iyo Cabsi soo wajahday Shaqaalaha Garoonka – idalenews.com
Qalabkii lagu baaraayay Boorsooyinka ee Garoonka Berbera oo Ciladoobay iyo Cabsi soo wajahday Shaqaalaha Garoonka
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Hargeysa, ayaa sheegaya in shaqa Joojin ku dhacday Qalabkii yaalay Garoonka Berbera ee lagu baarayay alaabada dadka rakaabka ah ee garoonka ka dhoofaya.
Qalabka halaabay ayaa waxa uu ahaa Qalab lagu baaraayay Boorsooyinka oo bil iyo bar ka hor la hagaajiyay ayaa waxa uu iminka mar kale gabay shaqadii uu Garoonka ka haayay.
Sameynta Qalabkaasi oo bil iyo bar laga joogo sameyntiisa ayaa waxaa haddana mar labaad Ciladoobay qalabka iyadoo ay Ciiddamadda Ammaanka iyo Shaqaalaha Garoonka walaac ka muujinaaya in Garoonka ay ka dhoofaan dad aan Boorsooyinkooda si fiican loo baarin.
Wasaara duulisti Maamulka Somaliland ayaa waxa ay shaqaalaha Garoonka ku amartay in garoonka uusan ka duulin Ruux aan bixin lacag 10$ oo horayba looga qaadi jiray dadka duulimaadka doonayo iyadoona Cilad ay ku jirto Qalabka Garoonka.
Dadka Garoonka ka dhoofa ayaa la yaaban sababta looga qaado 10-ka Dollar, mar haddii uu xumaaday mishiinkii loogu tallo galay isla markaana alaabtooda lagu baaro gacmaha.
Si kastaba ha ahaatee, Wasaaradda duulista iyo hawada maamulka Somalilanda ayaa ka walaacsan Cillada soo wajahday Qalabka, waxa ayna ka walaacsan yihiin in Garoonka ay ka duulaan dad la tuhunsan yahay oo aan baaritaano lagu sameyn Boorsooyinkooda.
Qarax miino oo maanta lala beegsaday gaari ay la socdeen Ciidamada Amisom